Etu esi achota ihe gha enyere gi na ahia YouTube? - SoNuker
Etu esi choputa ihe gha enyere gi na ahia ahia gi?
Ahịa ndị na-emetụta ndị mmadụ na YouTube na-aghọ nnukwu ihe ọhụụ n'oge a. Ọtụtụ n'ime ya bụ n'ihi mmụba na-arịwanye elu nke ikpo okwu vidio vidiyo n'onwe ya. Ka anyị leba anya na ọnụọgụ ole na ole ebe a:
na 2 ijeri ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike kwa ọnwa gburugburu ụwa (79% nke ndị ọrụ ịntanetị zuru ụwa ọnụ), YouTube apụtawo dị ka ihe na-aga n'ihu maka ndị na-ere ahịa ahịa.
Kwa nkeji, ihe dị ka narị awa atọ nke vidio vidio na-ebugo na ikpo okwu, nke na-enweta ihe karịrị nde mmadụ 30 n'otu ụbọchị. Ọzọkwa, 9% nke obere azụmaahịa na United States nọ n'elu ikpo okwu.
N'ime ụdị 1,300 na-ebupụtara ndị ọrụ YouTube ego iji kwado onyinye ha. Nke ahụ bụ ihe oge nile elu ruru na usoro nke pụrụ iche ika mmekọrịta.
N'iburu nọmba ndị a, ọ ga-abụ ihe dabara adaba ịsị na YouTube na ndị na-emetụta ahịa na-aga aka na aka ka asọmpi na-arị elu na enwere mmasị na-eto eto maka ndị mmadụ n'elu ikpo okwu. Agbanyeghị, ịga nke ọma na azụmaahịa intaneti YouTube ga-abịa naanị mgbe ị na-akpakọrịta na onye nwere ikike ime ihe. Ndị a bụ aro ole na ole ịgbaso mgbe ị na-achọ otu:
Mara niche gi
Nzọụkwụ mbụ iji chọpụta onye nwere mmetụta maka ika gị bụ ịkọwapụta banyere niche gị. Needkwesịrị ịhọrọ ụdị nke dabara na akara gị. Nkwenye ziri ezi dị ezigbo mkpa na ahịa mgbasa ozi YouTube. Gbalịa ịkọwapụta ihe ndị mmadụ na-ahụkarị. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-agụ akụkọ ihe mere eme ga-enwe mmasị na ikiri ọdịnaya akụkọ ihe mere eme na YouTube, ebe ndị fashionistas ga-adị njikere na ọwa ejiji. Soro onye na-emetụta ihe na-eziga ọdịnaya dị nso na akara gị. Nkwado igwefoto sitere na ndị dị otú ahụ ga-eme ihe ebube maka ika gị.
Mara onye na-ekwu maka gị
Chọpụta ihe kachasị mma ga-emetụta akara gị ga-achọ ka ị mara ahịa ị na-eche na ịpụ. Marketingre ahịa azụmaahịa ga-aghọrọ mkpụrụ gị naanị mgbe ndị na-ege gị ntị tụkwasịrị obi na akara gị. Mgbe ị nwetachara ihe ọmụma a, ịkwesịrị ịchọpụta onye na-ekwu maka ika gị na ebee. Enwere ike inwe ndị na - ekwu okwu maka akara gị na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta. Y’oburu n’ichoro na onye na acho ihe na akwado ya ma obu kwado udi akara gi, oghaara gi nfe imalite mmekorita ya na ha.
Mara onwe gị na ọkwa dị iche iche dị iche iche
Dịka, a na-enwe ọkwa nrụpụta ise akọwapụtara nke ọma dabere na ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ ha nwere: Elite (1 nde +), Marco (100K-1M), Mid-tier (25k-100K), Micro (10K-25K), na Nano (1K-10K). Mgbe ị na-ahọrọ iso ndị na-eme ihe ike na-adaba na ọkwa ndị a, ị kwesịrị iburu mmefu ego gị n'uche. Micro na nano-influencers n'ozuzu ha anaghị akwụ ụgwọ ma e jiri ya tụnyere ọkwa atọ ndị ọzọ. Ikwesiri ima ọkwa nke aka ha na-eke na YouTube iji mee nhọrọ kacha mma. Gbaa mbọ hụ na ị doro anya maka ọnụọgụ ọnụọgụ nke echiche ma rute na ịchọrọ ị nweta site na mkpọsa mgbasa ozi gị.
Lelee hashtags na-ewu ewu na taabụ na-ewu ewu
N'ikpeazụ, taabụ na-ewu ewu na YouTube nwere ike ịbụ isi iyi nke ndị na - emetụta gị ika. Maka onye okike YouTube ọ bụla, vidiyo na-ewu ewu nwere ike ịbụ onye na-ejide ya. Vidio ndị a na-enweta nkwado nke algorithms nke ikpo okwu, ọ bụ ya mere ha ji depụta ha na ngalaba a. Nwere ike sọfụ site na taabụ a iji mara nke YouTuber na-eziga vidiyo "kachasị mma". Otú ọ dị, njide ebe a bụ ịchọta influencer nke jikọtara nke ọma na akara gị. Nwere ike iwepụta hashtags na YouTube ka ọ bụghị naanị lelee vidiyo metụtara niche gị kamakwa ịchọpụta ndị okike ha. Ndị a nwere ike ime obere mmetụta, mana ha nwere ike ime mgbanwe.
Ga-anwale ndụmọdụ ndị a iji hụ ndị na - eme ihe ike ga - adabara gị maka mkpọsa gị na YouTube. Ha gha enyere gi aka imeghari iru ahia gi n’elu ikpo okwu.